karemy – Page 2 – Trinitera Malagasy
Étiquette : karemy
Alarobia IV Karemy
24 mars 2020 Njara Pascal
Izaia 49, 8-15/ Salamo 144/ Md Joany 5, 17-30 Marina fa amin’ny filazan’ny Jenezy 2,2 dia nitsahatra tamin’ny asany Andriamanitra ny andro fahafito (sabata), saingy araka ny fampianaran’ireo Rabìny kosa dia manohy miasa Izy mitahiry sy manome aina izay nohariany sady mitsara izay nindaosin’ny fahafatesana. Araka izany, i Jesoa nikolokolo ilay zanak’Israely niandry fahafahana…
Alatsinainy IV Karemy
22 mars 2020 Njara Pascal
Vakiteny I : Izaia 65:17-21, Salamo 30:2,4,5-6,11-12a,13b, Evanjely :Md Joany 4:43-54, Hanavao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Lazain’Izaia mpaminany aloha fa hanao lalana vaovao any an’efitra Izy (“Eksaody vaovao”: Iz 43, 18ss), avy eo hanavao ireo izay navotany, hiantso azy ireo amin’ny anarana vaovao (Is 62, 2), ary amin’ny vakiteny anio dia hanavao mihitsy ny fonenan’izy ireo: hanao…
Alahady faha-4 karemy Taona A
21 mars 2020 Njara Pascal
Tao amin’ny Evanjely anio dia asian’i Joany tsindrim-peo, adikany amintsika ny hevitry ny hoe “Siloe, izany hoe iraka”, satria ny maha-fahazavan’izao tontolo izao antsika no porofo manambara fa sitrana marina tokoa ny masom-panahintsika, satria manaiky Azy ho ilay iraky ny Ray, manaiky handeha “hisasa”, hatao batemy ao Aminy, ka hanaiky ny hanohy ny asa nanirahana Azy (Jn 20, 21).
TALATA III KAREMY
16 mars 2020 Njara Pascal
Daniely 3, 25-43/ Salamo 24/ Md Matio 18, 21-35 Amin’ity herinandro ity, manoloana an’ilay nanome taom-pahasoavana mba hikarakarana ny aviavy sao mba hanome vokatra ihany, dia omanin’ny Litorjia isika mba hibanjina ny hatsaram-pon’ilay Ray [miandry ny hiverenan’ny zanany mpandany mba hanaovany fety], mandefa ny zanany ho fahazavana hanilo ny lalna hizorantsika. Antitranterin’ny fampianaran’ny Evanjely…
Alahady fahatelo Karemy Taona A
14 mars 2020 Njara Pascal
I Kristy no loharano velona azo itokosana Eksaody 17, 3-7 /Salamo 94 Romana 5, 1-2, 5-8/ Md Joany 4, 5-42 Fakam-panahy ny fiainantsika manontolo, fizorana amin’ny fahaizana mampiasa ny zavatry ny tany, mba hahazoana sakaiza hotiavina ka hidirana amin’ny fiainana mandrakiza. Raha ampiasàna ireo sarisary ampiasan’ny Evanjely ihany moa dia hoe: tsy hanova ny…
13 mars 2020 Njara Pascal
Mikea 7, 14-20/ Salamo 102/ Md Lioka 15, 1-32 Rahefa hifanehatra amin’Andriamanitra ireo nahavanon-doza taminy, inona no ataony? Ny vakiteny anio no mamaly izany fanontaniana izany. Ambaran’i Mikea Mpaminany fa Andriamanitra mpamela heloka ny Andriamanitr’Israely. Mikea Mpaminany mamarana ny Bokiny (Mikea 7, 14-20) amin’ny vavaka fangatahana amin’YHWH mba hampiseho amin’i Jakoba ny fahamarinany, ary…
12 mars 2020 Njara Pascal
Jenezy 37, 3-28/ Salamo 104/ Md Matio 21, 33-46 Indry eny ny mpanonofy, andeha hovonintsika izy. Ny mety ho fiangarana na tombom-pitia dia mampirongatra ny fialonana sy ny fankahalana, izay miantomboka amin’ny tsy fahaizana miteny am-pitiavana ary mety hihafara amin’ny fitadiavana izay handringanana mihitsy aza. Mety hisy tonga saina ihany anefa ao, ka sahala…
11 mars 2020 Njara Pascal
Jeremia 17, 5-10/ Salamo 1/ Md Lioka 16, 19-31 “Ho voaozona ny olona mitoky amin’olombelona, sy manao ny nofo ho sandriny, ary miala amin’ny Tompo ny fony. Hohasoavina ny olona mitoky amin’ny Tompo, sy manatena ny Tompo ho tokiny… mamaly ny olona araka ny asany ny Tompo”. Inona ary ny hevitr’izany? Lazain’i Md Paoly…
10 mars 2020 Njara Pascal
Jeremia 18, 18-20/ Salamo 30/ Md Matio 20, 17-28 “Andeha isika hitady tetika hamely an’i Jeremia, fa tsy ho faty ny lalàna ao amin’ny mpisorona, na ny hevitra ao amin’ny hendry, na ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Mpaminany”. Araka ny hevitry ny olona tamin’izany andro izany dia ny mpisorona, ny olon-kendry sy ny mpaminany no…